Dhibaatooyin badan oo ku saabsan Manifold IMS - Geofumadas
1 Miyaan fuuli karaa IMS ay u adeegto Manifold oo ah Server leh nidaamka qalliinka Linux RedHat iyo server-ka Apache?
Haa, waa suurtagal in lagu dhejiyo Apache, maxaa yeelay waxaa jira qaab ay ku taageerto howlaha joogtada ah ee IIS. Laakiin xaqiiqdii macquul maahan in lagu dhejiyo Linux, waa inay noqotaa Windows.
2 Horaanba waan u daabacay adeegga IMS-ga sidii aan horayba u sharaxnay, IIS way shaqeyneysaa welina maysan daabicin.
Farriinta aad ii soo dirto waa:
Looma oggola inaad aragto boggan
Uma lihin fasax inaad ku aragto tusahan ama boggan la socda caddeynta la bixiyay.
Isku day waxyaalahan soo socda:
Guji badhanka Cusboonaysiinta si aad mar labaad iskudaydo asluubta kale.
Haddii aad u maleynaysid inaad awood u yeelan karto inaad ku aragto tusahan ama boggan, la xiriir maamulaha websaydhka adoo adeegsanaya cinwaanka emaylka ama lambarka taleefanka bogga hoyga.
HTTP 401.3 - Helitaan ay diidday ACL dhanka Kheyraadka
Adeegyada Macluumaadka Internetka
Xaaladdan, waxa maqan waa in la siiyo xuquuqda feylka .map, waayo waa inaad soo gashaa:
Guri / koontaroolka gacanta / qalab maamul / Adeegyada Macluumaadka Internetka
Haddii ay dhacdo in faylka lagu kaydiyo gal hoosaad ah 'Inetpub', kaliya dooro oo dooro faylka .map
Kadib midig-guji jiirka, guryaha, galka una ogolow dhammaan xuquuqda. Sidoo kale way ku habboon tahay in isla wax lagu sameeyo galka.
Haddii faylka lagu kaydiyo tusaha kale, kana duwan tahay Inetpub, waa inaad abuurtaa tusaha dalwaddu.
Waxaa lagu sameeyaa ficil / tusaal cusub / dalwaddii fekerka .. iyo saaxirku waa la raacaa illaa uu ka dhammaado. Kadib feylka .map-ka ayaa la doortaa oo guryaha ayaa la siiyaa.
Tan ka dib waa inaad dib u bilowdaa daabacaadda IIS.
3 Markii aad tafatirayso khariiddada, xuquuqda loo xilsaaray miyay lumisay?
Haa Waa xaalad layaableh, in lacala wax laga beddelo faylka .map la daabaco, lana badbaadiyo isbeddelada, xuquuqdii loo xilsaaray IIS ayaa luntay.
Taasi waa sababta uu u soo diro qaladkan:
HTTP 500.100. Qaladka serverka: qalad ASP
Macluumaadka farsamada (ee loogu talagalay shaqaalaha taageerada farsamada)
* Nooca qaladka:
Qalad aan la shaacin
/ cat3 /default.asp, sadarka 125
* Nooca browserka:
BARNAAMIJKA 723 BULSHADA ilaa /cat3/default.asp
Waxaan isku dayay inaan siiyo xuquuq mar labaad ... iyo waxba, mararka qaar haa, mararka qaar maya; sidaa daraadeed waxa ugufiican inaadan daabicin feylka la adeegsanaayo laakiin mid u yahay keyd ahaan; Tan:
Furo feylka .map ee aad rabto inaad daabacdo, galka uu ku kaydsan yahay, abuur daabacaada, tijaabi haddii daabacaadu ka shaqeyneyso biraawsarka, haddii kale xuquuq ka siiso maamulka IIS. Marka wax waliba shaqeeyaan:
Ku dheji nuqul faylka buugga meesha daabacan laga abuuray, tusaale ahaan
Tafatir cinwaanka faylka loo yaqaan 'config.txt file'
Kadib dib u bilow daabacaadda IIS, haddii aad furaysid biraawsarka wax walbana waa shaqeeyaan:
Dib ha u habeynin faylkaas mar labaad, laakiin wax ka beddel asalka, adoo samaynaya isbeddello iyo keydinta, beddelaya oo dib u bilaabaya adeegga IIS. Sidan, xuquuqda faylka looma waayi doono.
Inkastoo ay u muuqato mid jaban, markii la weydiin lahaa su'aalaha Manifold, aniga ayaa loo sheegay Taasi waa sidaas ... Waa maxay habka aan u xaliyay… Waxaan isku dayi doonaa barnaamij kuwa kuwa xorta ah ee u ogolaanaya inay sameyaan jadwalka waxqabeynta barnaamijyada si aan u arko bal in caloosha la iiga badalayo gacanta ay aniga xalinayso.
Post Previous" Hore Qeybta kale ee noloshayda
Post Next Kubadda cagta, sida wax u socdaan Caribbean-kaNext »